Guardiola Macallin guulahiisa ay laba jibbaar ka sareeyaan mudada uu xirfadiisa kujiro
Sunday, June 16th, 2019 - 20:08:03
Monday August 06, 2018 - 10:40:39 in Wararka by Hussein Hadafow
Xitaa kuwaqiimeeyaasha ugu wanaasgan ma aanayn qiyaasi Karin 10 sano oo xirfadiisa macallinimo in Guardiola uu24 koob ku guulaysan karo. Kuwa ayaa xitaa hoos un sii dhigay markii kulankisi ugu horeeyay ee Bracelona uu guuldaro kala kulmay kooxda Numancia isla markaana uu barbaro la galayt kooxda Racin Santander.
Guushii shalay ooa xad ahayuu ka gaaray koobka Community Shied ee ay kooxdiisa 2-0 uga adkaatay Cheslea,waxay koob kale ku dartayQaanada armajadiisa ioo horayba u buuxday, waxayjhna ka dhigtay mid kamid ah macalliinta ugu wanaagsanqaaradda Yurub.
Guardiola 4 sano oo uu kusgnaaBarcelona ayaau hanatay 14 koob
3 LaLiga ,2- Copa Del Rey ah, 3 Spanish Super Cups,2 Champions Leagues, 2 European Super Cups iyo 2 Club World Cups.
3 sano oo uuhogaaminayay Bayer Munich waxuu ku darsaday 7 koob
3- Bundesliga , 2 German Cup , 1 European Super Cup iyo 1Club World Cup.
Manchester Ciy oo laba xilli ciyareed oo dhamaystiran uu ku qaatay midna uu hadda bilow u yahay waxuu hantay 3 koob oo kala ah.
Premier League ,League iyo Community Shield
hadda waxuu doonaya koobka horyaalada Yurub oo ay hanashadisia ugu dambaysay 2011 , halka Manchester City ay iyana tartaamada yurubh koobla’aan tahay tan iyo 1969-70 kolkas oo ayku guulaysatay koobki a nasaqay ee European Cup Winners' Cup.